Harry Potter mafirimu vaiva vakawanda vanobudirira firimu dzinotevedzana nguva dzose. Vakawanda mifananidzo kubva Harry Potter mafirimu vakapfurwa mukati London pachayo. Ungave uri ikafa dzakaoma kukuchidzira of Harry Potter firimu kana bhuku dzino, London zvechokwadi ndiyo nzvimbo yakanakisisa kushanyira ive yechokwadi Harry Potter ruzivo. Unoda kuziva chii 5 Places kuzoshanyira nokuda kwenyu Harry Potter Weekend muLondon? Save A Train akaita akaanyora aya kuti wizarding kwako uchinzvera ane nyore uye zvinonakidza mumwe!
Izvi ndiye ruzivo mumabhuku edu! Ona wokutanga ruoko rinovira, zvokupfeka, uye zvokushandisa anoshandiswa ose Harry Potter mafirimu! Danho mukati vamwe nzvimbo firimu kusanganisira; The Great Hall, Dumbledore hofisi uye Hagrid dumba.
Where kuwana ichi? musoro pamusoro kune Warner Bros. Studios Tour London. The Making of Harry Potter ari paruzhinji kukwezvana muna Leavesden kwakadziva kumabvazuva England. Chisingafaniri kuvhiringidzwa Wizarding Nyika Harry Potter pamusoro Universal Studios dingindira mumapaki. Zviri zvachose zviratidzwa kupa rechokwadi seri noruzhinji nzwisa Harry Potter mafirimu. Iva mashiripiti zuva kubva aine seri noruzhinji uchimuratidza Harry Potter mafirimu pa Warner Bros. Studio Tour London.
Pakati maawa 9am uye 9 pm unogona kubhadhara kuva nyanzvi mifananidzo uye mubatsiri akubatsire kuwana zvakanakisisa zvinobvira Photo, wakakwana Harry Potter sikavha uye / kana seinä. achiri Unogona kutora pachako Photo wako pano mahara.
Kana unogona chete kushanyira panguva yepamusorosoro nguva uye vane mari kupembedza, ungada kufunga rokutenga VIP Photo Pass lanyard. Izvi zvinosanganisira chikuva 9 ¾ lanyard, wako mufananidzo uye tungamidzana kusvetuka, zvose nokuda £ 20.
Chii Harry Potter Weekend muLondon pasina kuedza munhu mugate? This Magical Cocktail Experience chinhu 1 hr 45 Maminitsi kirasi immersive mu London. Don nguvo dzako, vanobata wands dzako uye agadzirire vakawanda Spirited Potions vaunodzidza asi, iyi Immersive Magical Cocktail Experience nokuda Two pa The mugate, London.
At rako dyidzana basa chiteshi, muchawana kuidza kubuda mashiripiti wako wand nokudurura munhu welcome drink. Uchabva kushandisa samolecular mixology unyanzvi yokubika wako zvinonaka elixirs, imwe neimwe achava unhu hwakasiyana uye zvinokonzerwa. Gadzirirai kusanganisa dzimwe mashiripiti pa London vakawanda enchanting coctail ruzivo!
Alcohol vakasununguka, gluten uye kueche mikana yose iripo
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Places To Visit For Your Harry Potter Weekend In London” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/harry-potter-weekend-london/– (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)